बर्ड फ्लु रोग नियन्त्रणमा सबै संयन्त्र परिचालित छन्
पछिल्लो समय नेपालमा पनि बर्ड फ्लु रोग देखिएको छ । पहिले काठमाडौंको साङ्लाखोला क्षेत्रमा देखिएकोमा सुर्खेतमा समेत यो रोगको संक्रमण पुष्टि भएको छ । प्रस्तुत छ, नेपालमा यो रोग देखिनुका कारण, यसका प्रकार, रोकथामका उपाय लगायत विषयमा वरिष्ठ पशु अधिकृत डा. चन्द्र ढकालसँग आर्थिक अभियानका प्रशान्त खड्काले गरेको कुराकानीको सार :
भारतमा देखिएको बर्ड फ्लु एकाएक काठमाडौंमा कसरी देखियो ? कुन माध्यमबाट यहाँ आइपुगेको हुन सक्छ ?
स्वाभाविक प्रश्न गर्नुभयो । तर भारतको पनि कर्नाटकमा देखिएको छ, केरलामा देखिएको छ, जुन नेपालको सीमानाबाट करिब २ हजार किलोमिटर टाढा हो । त्यहाँबाट नेपालमा हाल कुनै पनि पन्छी तथा तज्जन्य पदार्थ आउँदैनन् । त्यसैले त्यहाँका पन्छीहरूबाट आउने सम्भावना न्यून छ । किनभने भारतको विहारमा यो रोग देखिएको र यहाँ पनि काठमाडौंमा नभई वीरगञ्ज आसपासका क्षेत्र अथवा तराईमा देखिएको भए त्यताबाट आयो कि भन्ने सम्भावना हुन्थ्यो । त्यसैले काठमाडौंमा चाहिँ भारतबाट आएको हुन सक्ने सम्भावना न्युन छ ।
यसको मतलब हाल नेपालमा देखिएको बर्ड फ्लु भारतबाट आएको होइन ?
होइन नै त भन्न सकिँदैन । तर हुन सक्ने सम्भावना न्यून आकलन गर्न सकिन्छ । अध्ययनले पुष्टि नगरीकन हामीले ठ्याक्कै यही हो भन्न त सक्दैनौं । तैपनि यो अहिले जति पनि ठाउँमा देखिएको छ । जस्तै– शुरूमा भारतका केही ठाउँमा देखियो । त्यसपछि काठमाडौंको तारकेश्वरमा, सुर्खेतमा देखियो र अहिले रूसमा पनि देखिएको छ । यी सबै ठाउँमा एउटै बर्ड फ्लुको ‘एचफाइभएनएट’ प्रजाति नै देखिएको छ ।
अहिले पानीहाँसहरू (कर्‍याङकुरुङ पनि भनिन्छ)बाट आएको हो भनिएको छ । साइबेरियामा चिसो बढेपछि ती हाँसहरूको खेल्ने र खाने पानीका स्रोतहरूमा हिँउ जम्छ र खानेकुरा पाउन छाडेपछि ती हाँसहरू पानी नजमेका ठाउँ खोज्दै बसाइ सरेर भारत, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, म्यानमार, लाओस, नेपाल लगायतका ठाउँमा आउने गर्दछन । यही क्रममा यिनै हाँसबाट रोग सरेको हुन सक्ने अधिक सम्भावना छ । काठमाडौं पनि ती चराहरूको बसाइसराइको मार्गमा पर्दछ । यहाँसम्म भाइरस फैलिनुमा त्यो पनि कारण हुन सक्छ ।
यो रोग मानिसमा सर्छ कि सर्दैन ?
यो रोग मान्छेमा सर्छ । यसको नियन्त्रणका उपाय पनि छन् । हामी कुनै पनि सूचना उपभोक्ताबाट लुकाउँदैनौं । जुन ठाउँमा बर्ड फ्लु फैलिन्छ, त्यस ठाउँलाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिन्छौं र सही सूचना आमजनमानसमा विज्ञप्ति मार्फत पठाउँछौं । यसका लागि हामी पशु स्वास्थ्य सेवा विभाग र यससम्बन्धी विज्ञहरू, नार्क र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग विस्तृत बुझेर मात्रै सूचना सम्प्रेषण गर्छौं । यसबाट आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन । किनभने हामी यसमा अति संवेदनशील छौं । एकदमै सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेका छौं । भारतमा आउनेबित्तिकै हामीले खोजेर पो भेटियो । नखोजेको भए भेटिँदैन थियो नि ।
यो रोग मानिसबाट मानिसमा सर्ने सम्भावना चाहिँ कत्तिको छ ?
वैज्ञानिकहरू यो विषयमा गम्भीर छन् । तर अहिलेसम्म यस्तो देखिएको छैन । पन्छीबाट मानिसमा संक्रमण भएका प्रमाणहरू भने छन् । सन् २००६ मा थाइल्यान्ड, हङकङ लगायत धेरै देशमा बर्ड फ्लु सरेर मानिसको मृत्यु भएको थियो । नेपालमा केही वर्षअघि काभ्रेमा एकजना मानिसको मृत्यु बर्ड फ्लुको संक्रमणबाट भएको पुष्टि भएको थियो । विशेषगरी यसले पन्छीलाई नै असर गर्ने हो । तर यस भाइरसमा म्युटेसन परिवर्तनको क्षमता बढी हुने भएकाले स्वरूप परिवर्तन गरी मानिस र जनावरमा पनि जान सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
यसअघि सन् २०१३ मा नेपालमा बर्ड फ्लु फैलिँदा देशैभर त्यसको असर परेको थियो । तर यस वर्ष त्यस्तो हुन पाएको छैन । यसलाई नियन्त्रणको प्रयास सफल भएर हो ?
पहिलो कुरा त हामीले भारतमा संक्रमण देखिनेबित्तिकै सीमा नाकामा कडाइ गर्‍यौं । भारतबाट अवैध रूपमा पन्छी तथा तज्जन्य वस्तु भित्रिँदा त्यसको रोकथाम तथा आवश्यक कानूनी कारबाही गर्न विभिन्न जिल्लामा प्रहरी प्रशासन, स्थानीय निकायसँग समन्वय समेत गर्‍यौं । विभागले पनि वर्षैभरि यसको निगरानी गरिरहेको हुन्छ । कुनै ठाउँमा शंकास्पद तरीकाले पशुपन्छी मरे भने परीक्षण गरी त्यसको कारण पत्ता लगाउँछौं । त्यही क्रममा विभिन्न ठाउँबाट नमूना परीक्षण भइरहेको थियो । वरिपरीको क्षेत्रमा जब भाइरस देखिन थाल्यो, त्यसबेला हामीले हाम्रा निकायहरूलाई सजग बनायौं ।
साथै पहिले किसानलाई प्रदान गरिने क्षतिपूर्ति कम थियो, जसले गर्दा कहीँ कतै पन्छी मर्दा पनि किसानले खुलेर हामीलाई खबर गर्दैनथे । भित्रभित्रै बेचबिखनको काम चलिरहने हुनाले रोग चाँडो फैलिएको थियो । तर हाल जिल्ला दररेट समितिले क्षतिपूर्तिको रकममा निकै सुधार गरेको छ । उक्त समितिले निर्धारण गरेको मूल्यको ७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति किसानले प्राप्त गर्दछन् ।
यसपटक हाँस र टर्कीमा मात्र यो रोगको संक्रमण देखिएको छ । कुखुरामा सर्न सक्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
पन्छीहरूमा सर्न सक्छ । तर संक्रमित तथा रोगी पन्छीको सुली, सिंगान, दानापानी, फार्ममा प्रयोग हुने उपकरण, बाहिरी आगन्तुक, जंगली पन्छी वा जनावर र फार्ममा काम गर्ने मानिसबाट पनि सर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । साथै पशुपन्छीजन्य वस्तु ओसारपसार गर्दा पनि संक्रमण हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता वस्तुको ओसारपसार नगर्ने वा स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणपत्र लिएर मात्र गर्ने/गराउने कार्य गर्नु पर्दछ ।
संक्रमण व्यापक रूपमा फैलिएमा नमूना परीक्षणका लागि प्रयोगशालाको पर्याप्तता छ त ?
हामीसँग केन्द्रीय पशुपन्छी अन्वेषण प्रयोगशाला एउटा छ भने पन्छीको मात्रै अन्वेषण गर्ने राष्ट्रिय पन्छीरोग अन्वेषण प्रयोगशाला चितवनको भरतपुरमा छ । यो लगायत पहिलेका पाँच विकास क्षेत्रमा संघीय संरचना अन्तर्गत पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, धनगढी र सुर्खेतमा छन् । यी प्रयोगशालामा पनि पीसीआरको सुविधा छ । तर विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, धनगढी र चितवनमा चाहिँ कोभिड परीक्षणका लागि प्रयोग भएको छ । जनकपुरको प्रयोगशाला स्वाथ्य मन्त्रालयले हामीलाई फिर्ता गरिसकेको छ । अन्य चारओटामा अहिलेसम्म कोभिड नै परीक्षण भइरहेको छ । हामीलाई उपलब्ध गराइदिन मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका छौं । यो रोग यत्तिकै साधारण अवस्थामा रहिरह्यो भने त समस्या पर्दैन । तर व्यापक रूपमा फैलियो भने हालको यो क्षमताले नपुग्न सक्छ ।
भारतमा जब बर्ड फ्लु देखिन्छ, त्यसबेला नेपाली व्यापारीले उताबाट सस्तो मूल्यमा कुखुरा भित्र्याउँछन् । यसले गर्दा नेपालमा बर्ड फ्लु भित्रिन सहयोग पुग्छ भन्ने सुनिन्छ । यस्तो किन हुन्छ ?
यसमा नाफा कमाउने ध्येयले उताबाट सस्तो मूल्यमा भित्र्याइने गरेको देखिन्छ । उता सस्तो मूल्यमा पाएपछि अवैध रूपमा आयात गरेर यहाँ महँगोमा बेच्ने दाउ कतिपय व्यापारीको हुन्छ । उनीहरूले यस्तो गरिरहँदा जोखिम पनि भित्र्याइरहेका हुन्छन् । अवैध काम भएकाले कारबाहीमा पर्ने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । यो संवेदनशील विषय भएकाले यस्तोमा संलग्न व्यवसायी नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यससँगै नियामक निकायहरू समेत सजग हुन जरुरी छ ।
माघ १६ गते तारकेश्वरमा बर्ड फ्लु देखियो । त्यही दिन कुखुराको मासुको मूल्य ३७० बाट घटेर ३५० रुपैयाँमा झर्‍यो । फेरि अहिले सुर्खेतमा बर्ड फ्लु देखिएपछि पुनः मूल्य बढेर ३७० नै पुगेको छ । यसरी ठाउँ ठाउँमा बर्ड फ्लु देखिरहँदा समेत मासुको मूल्य बढ्दा सही सूचना लुकाइएको हो कि भन्ने पनि सर्वसाधारणको शंका छ । वास्तविकता के हो ?
यसमा कुनै पनि सूचना लुकाइएको छैन । यदि व्यापारीहरूले लुकाए भने पनि त्यो उनीहरूलाई नै नोक्सान हो । व्यापारीलाई त लुकाउनु भन्दा देखाउनुमा फाइदा छ । किनभने सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ । लुकायो भने त सबै नष्ट भयो । यता कुखुरा पनि मर्‍यो, उता क्षतिपूर्ति पनि पाइएन । त्यसैले यो कतै पनि लुकाइएको छैन । देशैभरका विभिन्न स्थानहरूमा यसको परीक्षण र रोकथामका लागि हाम्रो सबैं संयन्त्र परिचालित छन् । त्यसैले जुन तवरले हल्ला आएको छ, त्यो एक किसिमको भ्रम मात्र हुन सक्छ । बजार मूल्य चाहिँ माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने कुरा हो । त्यसैले मूल्यको सन्दर्भमा म खासै उल्लेख गर्न चाहन्न । यसमा हाम्रो संलग्नता पनि खासै छैन । यस विषयमा वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग र व्यवसायीहरूको संगठनले बढी बुझेका होलान् । तर पनि बर्ड फ्लु आएको बेला मूल्य घटाउने र नआएको बेला मूल्य बढाउने गर्नु पनि भएन ।
यसबीचमा कुखुरामा अन्य कुनै रोगहरू देखिएको छ ?
अहिले हामीले बर्ड फ्लु परीक्षण गरिरहँदा ‘रानिखेत’ रोग पनि धेरै देखिएको छ । यसको कारणबारे थप अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ ।
बर्ड फ्लुकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, यो फुडबर्न डिजिज होइन, कन्ट्याकबाट मात्रै सर्ने भएकाले धेरै आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । कुनै पनि संक्रमित पन्छी खाद्य श्रृंखलामा आउनु भएन । त्यसमा सबै जना सचेत हुनुपर्‍यो । यसलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ । पन्छी तथा तज्जन्य वस्तुको ओसारपसार चेकजाँच गराएर मात्र गर्ने, आफ्नो फार्ममा सरसफाइ राख्ने गरौं ।